Statement by Ambassador Kyaw Moe Tun at the UN Security Council Committee on Counter-Terrorism
Statement by Ambassador Kyaw Moe Tun, Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar to the United Nations at the United Nations Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism on the work of CTED with the Member States of South and South-East Asia pursuant to Security Council resolution 2395 (2017), held on 14 February 2022
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းမှ
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး၌ စစ်တပ်မှ ကျူးလွန်နေသည့် အကြမ်းဖက်မှုများကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့် အရေးယူပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံ
(နယူးယောက်မြို့၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်)
၁။ ကုလသမဂ္ဂအဆောက်အဦ၌ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်သည့် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး၌ တောင်အာရှနှင့် အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး (Counter-Terrorism Committee Executive Directorate-CTED) ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အိန္ဒိယအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် H.E T. S. Tirumurti က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရှင်းလင်းပြောကြားသည့် အစည်းအဝေးတွင် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းမှ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
၂။ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း၏ ဆွေးနွေးမှုတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အဓိကအချက်များပါဝင် ပါသည်-
(က) ယခုကဲ့သို့ အလွန်အရေးပါသော ဆွေးနွေးပွဲကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အိန္ဒိယအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်နှင့် CTED တို့အား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ဆောင်ချက်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားပေးကြသူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် CTED နှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ အေဂျင်စီများမှ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ပေးမှုအတွက် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါကြောင်း၊ ထို့အတူ နိုင်ငံများမှ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကူညီပေး နေမှုများအတွက်လည်း ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း၊
(ခ) မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုကို မည်သည့်အခြေအနေ၊ မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်ပုံစံဖြင့် မည်သူမှ ကျူးလွန်စေကာမူ ဘယ်သောအခါမှ ခွင့်မလွှတ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အကြမ်းဖက်မှုကို အပြင်း ထန်ဆုံး ရှုတ်ချပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် CTED နှင့် အခြားသောသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိသည်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုပါကြောင်း၊
(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁-၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့၌ စစ်တပ်မှ မအောင်မြင်သော နိုင်ငံတော်အာဏာ မတရားသိမ်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ စစ်တပ်သည် မြန်မာပြည်သူများအပေါ်၌ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုမြောက်များစွာ ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့် စနစ်တကျကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် သက်ဆိုင်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယန္တရား IIMM ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်မှုများသည် လူသား မျိုးနွယ်စုအပေါ် ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှုပင်မြောက်နိုင်သည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊
(ဃ) စစ်တပ်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်အတွင်း၌လည်း လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုများ၊ ပြည်သူများ ၏ နေအိမ်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းများ၊ လူသားမဆန်သောပြစ်မှုများနှင့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို ကျူးလွန်ခဲ့ပါကြောင်း၊
(င) ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့၌ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြသည့် ပြည်သူအုပ်စုကို စစ်တပ်မှ အနောက်ကနေ၍ ကားဖြင့်ဝင်တိုက်ခဲ့ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း၊ အဆိုပါဖြစ်စဉ်သည် စစ်တပ်မှ လူမြင်ကွင်းတွင် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း၊
(စ) ယေဘုယျအားဖြင့် ယင်းသို့သော လူသားမဆန်သည့်အပြုအမူကို အကြမ်းဖက်သမားများကသာ ကျူးလွန်လေ့ရှိကြောင်း၊ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ ထိုသို့သော အကြမ်းဖက်မှုကို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အတွက် ဖော်ဆောင်နေသည်ဟုဆိုသော တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ကျူးလွန်နေသည်ကို မြင်တွေ့ရသည်မှာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေဖြင့် အဆိုပါအကြမ်းဖက်မှုမျိုးကို အပြင်းထန်ဆုံးရှုတ်ချသင့်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုလည်း တရားဥပဒေအရ အရေးယူသင့်ပါကြောင်း၊
(ဆ) သို့ဖြစ်ရာ မိမိအနေဖြင့်လည်း CTED နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအား စစ်တပ်မှ ကျူးလွန် လျက်ရှိသော ဤသို့အကြမ်းဖက်မှုများကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ပေးရန်နှင့် အဆိုပါအကြမ်းဖက်မှု များအား အမြန်ဆုံးအရေးယူနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေရန် မေတ္တာရပ်ခံပါကြောင်း၊
(ဇ) မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း ဤအရေးပါသည့် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကိစ္စရပ်များတွင် CTED၊ Interpol၊ UNODC၊ UNOCT နှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ထပ်မံကတိပြုပါကြောင်း။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၊ နယူးယောက်မြို့
at the United Nations Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism on the work of CTED with the Member States of South and South-East Asia pursuant to Security Council resolution
(New York, 14 February 2022)
I wish to thank Ambassador T. S. Tirumurti, Permanent Representative of Indian and Chair of the Committee on counter-terrorism and CTED for organizing this important briefing.
I thank all briefers for their comprehensive and informatics statements.
I would like to commend the leadership of CTED, Interpol, UNODC and UNOCT for their excellent work in countering terrorism.
We are delighted to learn that CTED and all relevant organizations spare no efforts to help member states to address counter-terrorism challenges.
Myanmar never condones terrorism in any form, at anywhere, by anyone and under any circumstances. We condemn them in strongest possible terms.
On my country, Myanmar, we would like to express our willingness to continue working with CTED and all relevant organizations.
Since the attempted military coup in Myanmar on 1 February 2021, the military has committed widespread and systematic violence against the population. According to the UN Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM), these grave violations could amount to crimes against humanity. Last year, the military also committedanumber of massacres as well as burning houses, inhumane acts and atrocities. On5December 2021 in Yangon, our biggest city, the military vehicle drove through from the backagroup of peaceful protestors, resulting in injured ofanumber of people. It was an open-air criminal event. Such inhumane action is usually conducted only by terrorists. Sadly in Myanmar, the so-called law enforcers are engaging such terrorist acts. These acts should be met with strong condemnation by the international community. Perpetrators should be brought to justice.
Therefore, I wish to request the CTED and relevant organizations to follow closely this kind of terrorist acts and to find all possible ways to take action against them swiftly and accordingly.
I wish to reaffirm our commitment to work closely with CTED, Interpol, UNODC, UNOCT and other relevant organizations in addressing this important matter of counter-terrorism.